Maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku ridday askar dhac ka geysatay Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku ridday askar dhac ka geysatay Muqdisho
Maxkamadda ciidamada oo xukun adag ku ridday askar dhac ka geysatay Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Maxkamadda ciidamada qalaka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun xabsi ciidan ah ku ridday labo askari oo lagu helay inay dhac baahsan u geysteen Carwada Kaah Electronic oo ku taal degmada Hodan ee gobolka Banaadir.
Faarax Cabdullaahi Calasow (Faaraxey) iyo Maxamed Abshir Maxamed (Camey) oo maqane ayaa markii ugu horraysay ka soo Muuqday Camerada Carwa Kaah Electronic oo ku taal Taleex ,gaar ahaan 29-kii June Sanadkan iyaga oo dhac u gaysanayo Carwada.
Labada eedeysane ayaa Carwada ka qaaday IPHONE, SAMSUNG iyo agab kale oo electronic ah oo qiima ahaan ku kacayo $12945 Dollar.
Ciidamada ammaanka ayaa goor dambe ku guuleystay in la soo qabto laba Alifle Boliis Faarax Cabdullaahi Calasow (Faaraxey) oo laga dhex aqoonsaday muuqaalka Camerada, waxaana labadii July lagu wareejiyay kay’adda dambi baarista Boliiska ee CID.
Baaris dheer kadib ciidamada amniga ayaa ku soo wareejiyay billowgii August sanadkan Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka Sida oo xilligaasi ka codsaday garsoorka in loo gudbiyo xabsiga dhexe gar-suge ahaan.
Xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa isku howlay sidii ay u samayn lahaayeen baaris kale oo ay ku xaqiijinayaan eedeymaha Boliiska, waxa ayna billowgii Oktoobar bishan codsadeen in la muddeeyo dhageysiga dacwad ka dhan ah Faarax Cabdullaahi Calasow “Faaraxey” iyo Maxamed Abshir Maxamed “Camey” oo maqana ah.
Maxkamadda ayaa aqbashay dhageysiga dacwadda 12-kii Bishan. Maxamed Cabdullaahi Khaliif oo kamid ah Xeer Ilaaliyaasha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa ku eedeeyay labada eedeysane ee midi baxsadka yahay in ay magaallada dhac baahsan ka gaysteen balse ay tahay Camerada kaah meesha kaliya ee laga helay cadayntooda, waxa uu sidoo kale soo bandhigay dambiya kale oo uu gaystay eedeysanaha Maxkamadda hor taagan sida dhaawac uu hore dhibane ugu gaystay.
Maxkamadda ayuu ka codsaday in lagu xukumo ciqaab u dhiganto qodobada ay ku soo eedeeyeen.
Qareenka u dooday eedeysanaha ayaa Maxkamadda ka hor sheegay in ay diyaar u yihiin in ay kala xaalaan Carwa Kaah magta qaybtooda, sidaas darteed ay Maxkamadda ka ogolaatay in laga qafiifiyo xukunka.
Dable Asluub Maxamed Abshir Maxamed “Camey” ayay Maxkamadda amar soo qabasho iyo hor keenis maxkamadeed ah u jartay hay’adaha amniga 26-kii September sanadkan.
Garsoorayaasha Maxkamadda oo fursad u siiyay dhinacyada dacwadda kaalintooda Maxkamadeeda ayaa ugu dambayn maanta kuwada xukumay Faarax Cabdullaahi Calasow “Faaraxey” iyo Maxamed Abshir Maxamed “Camey” oo maqana ah min 10 sano oo xabsi ciidan ah iyo bixinta qiimaha lacageed ee ku xusan Dambiga ay galeen sida dhinacyada dacwadda uu u sheegay Gaashaanle Maxamed Cabdi Muumin oo ka tirsan Garsoorayaasha heerka Koowaad ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Xukunsanayaasha ayaa haysta fursad ay ku dalban karaan Rafcaan muddo ku siman 30 cisho.